वाणिज्य बैंकहरुको नाफा ४५ अर्ब नाघ्यो - कारोबार - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
इन्भेष्टमेन्ट र एनआईसीसहित ६ बैंकको नाफा २ अर्ब बढी
दीपक भट्ट काठमाडौं बैशाख ३०
चालू आवको त्रैमासिक अवधिमा नाफामा ३ अर्ब कटाउनेमा वाणिज्य र नबिल बैंक रहेका छन्। त्यस्तै तेस्रोमा रहेको इन्भेष्टमेन्ट बैंक र त्यसपछि निक्षेप संकलन र शाखा विस्तारमा आक्रामक देखिएको एनआईसी एसिया बैंक रहेको छ।
सञ्चालनमा रहेका सबै वाणिज्य बैंकहरु नाफामा देखिएका छन्।
चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा २८ वाणिज्य बैंकहरुको नाफा मात्रै ४५ अर्बभन्दा माथि देखिएको छ।
यो अवधिमा सबैभन्दा बढी नाफा आर्जन गर्ने बैंकमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अगाडि देखिएको छ। चालू आवको चैत मसान्तसम्मको विवरणअनुसार वाणिज्य बैंकले ३ अर्ब ४९ करोड खुद नाफा आर्जन गरेको छ। बैंकहरुको नाफामा यो सबैभन्दा उच्च हो। गत वर्ष वाणिज्य बैंकले ३ अर्ब ८ करोड नाफा आर्जन गरेको थियो।
त्यस्तै दोस्रोमा नबिल बैंक रहेको छ। चालू आवको त्रैमासिक अवधिमा नाफामा ३ अर्ब कटाउनेमा वाणिज्य र नबिल बैंक रहेका छन्। नबिलले चैत मसान्तसम्ममा ३ अर्ब १९ करोड खुद नाफा आर्जन गरेको छ। त्यस्तै तेस्रोमा रहेको इन्भेष्टमेन्ट बैंकले २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। त्यसपछि निक्षेप संकलन र शाखा विस्तारमा आक्रामक देखिएको एनआईसी एसिया बैंकले २ अर्ब २७ करोड रहेको छ।
वाणिज्य बैंकले चैत मसान्तसम्म १ खर्ब ७२ अर्ब निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ३७ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ। एक वर्षको अवधिमा बैंकको निक्षेप संकलन ८ अर्बले बढेको छ भने कर्जा प्रवाह २० अर्बले बढेको छ। निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर बढी देखिए पनि लगानीयोग्य रकमका आधारमा बैंक सहज अवस्थामा छ। बैंकको सीसीडी रेसियो ७४ प्रतिशत रहेकाले निक्षेप संकलन नभए पनि बैंकले अरु थप ऋण रकम लगानी गर्न सक्ने क्षमतामा देखिन्छ।
९ अर्बको सरकारी सेयर पुँजी रहेको वाणिज्य बैंकको जगेडा कोषको आकार पनि मजबुत छ। बैंकको जगेडा कोषमात्रै १४ अर्बको छ भने प्रतिसेयर आम्दानी ३८ रुपैयाँ ८६ पैसा छ। बैंकको व्यवसायसँगै निष्क्रिय कर्जा बढ्नुले भने व्यवस्थापकीय क्षमतालाई कमजोर देखाएको छ। बैंकको निष्क्रिय कर्जा ४ दशमलव २८ प्रतिशत पुगेको छ। समीक्षा अवधिमा यस्तो कर्जा २ दशमलव ९० प्रतिशतबाट बढेको हो। त्यस्तै बैंकको आधार ब्याजदर जम्मा ५ दशमलव ३८ प्रतिशत छ। बैंकको आधार दर घट्दै गएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा आधार ब्याजदर ६ दशमलव २० प्रतिशत थियो।
यस्तै, नबिल बैंकको चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनाको वित्तीय विवरणअनुसार नाफा ३ अर्ब १९ करोड गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको चैतसम्म कमाएको ३ अर्ब ९ करोड नाफाको आकारमा करिब १० करोडले वृद्धि गरी नबिलले नाफाको आकार सो अवस्थामा पु¥याएको हो। एक वर्षको अवधिमा खुद ब्याज आम्दानी तथा गैरब्याज आम्दानीमा उच्च सुधार गरेको बैंकको कर्मचारी र सञ्चालन नाफामा समेत सोहीअनुसार वृद्धि भएको छ। बैंकको उक्त अवधिमा खुद ब्याज आम्दानी ४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँबाट बढाएर ५ अर्ब ५१ करोड तथा खुद गैरब्याज आम्दानी ५६ करोड रुपैयाँबाट ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कर्मचारी खर्च १ अर्ब २१ करोडबाट बढेर १ अर्ब ४० करोड तथा सञ्चालन खर्च ४० करोडबाट बढेर ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। बैंकको आधार ब्याजदर भने बढेर ७ दशमलव ३३ प्रतिशतबाट ७ दशमलव ९९ प्रतिशत पुग्दा बैंकको कस्ट अफ फण्ड ४ दशमलव ६३ प्रतिशतबाट ६ दशमलव ०६ प्रतिशत पुगेको छ। बैंकले ब्याजको स्प्रेडदर ४ दशमलव ८९ प्रतिशतबाट ४ दशमलव ६३ प्रतिशतमा झरेको छ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा मुनाफा २ अर्ब ५६ करोड आर्जन गरेको छ। जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा मुनाफा केही कम हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले २ अर्ब ८४ करोड नाफा कमाएको थियो। बैंकको निक्षेप संकलन १ खर्ब ४२ अर्ब तथा कर्जा प्रवाह १ खर्ब २४ अर्ब रहेको छ। उक्त अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ४ अर्ब ११ करोडबाट बढेर ४ अर्ब ९१ अर्ब पुगेको छ भने सञ्चालन खर्च १ अर्ब ५८ करोडबाट बढेर १ अर्ब ८३ करोड पुगेको छ। बैंकले चुक्ता पुँजी समेत १० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँबाट १२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ। आधार ब्याजदरमा भने बैंकले शून्य दशमलव ५८ प्रतिशतले सुधार ल्याएर ८ दशमलव ५४ प्रतिशत कायम गरेको छ। बैंकले कमाएको उक्त नाफाका आधारमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी २७ दशमलव ०७ प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्ष यो आम्दानी ३५ दशमलव ५५ प्रतिशत थियो।
निक्षेप संकलन र शाखा विस्तारमा आक्रामक एनआईसी एसिया बंैक लिमिटेडले चालू आ.व. तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा २ अर्ब २७ करोड खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिको खुद मुनाफा ९३ करोड रहेको थियो। बंैकले यस आर्थिक वर्षमा ३३.५ प्रतिशत (रु. ५७ अर्ब २४ करोड) को वृद्धि तथा वार्षिक विन्दुगत आधारमा ५० प्रतिशत (रु. ७५ अर्ब ८१ करोड) को वृद्धि गरी वासलातको आकार रु. २ खर्ब २८ अर्ब १९ करोड पु¥याउन सफल भएको छ। जसअन्तर्गत कर्जातर्फ यस आर्थिक वर्षमा २४ प्रतिशत (रु. २९ अर्ब)को वृद्धि तथा वार्षिक विन्दुगत आधारमा ३७ प्रतिशत (रु. ४० अर्ब ५३ करोड) को वृद्धि गरी रु. १ खर्ब ४९ अर्ब ५० करोड र निक्षेप संकलनतर्फ यस आर्थिक वर्षमा १८ प्रतिशत (रु. २६ अर्ब ८७ करोड) को वृद्धि तथा वार्षिक विन्दुगत आधारमा ३३ प्रतिशत (रु. ४४ अर्ब ३७ करोड) को वृद्धि गरी १ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड पु¥याउन सफल भएको छ। बैंकको प्रतिसेयर आय १२४ प्रतिशतले वृद्धि भई ३४ रुपैयाँ ७१ पैसा तथा स्वपुँजीमा प्रतिफल ९० प्रतिशतले वृद्धि गरी २१.४६ प्रतिशत पु¥याउन सफल भएको छ।
नेपाल बैंक लिमिटेडले ९ महिनाको अवधिमा २ अर्ब २४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको छ। यस अवधिमा नेपाल बैंक लिमिटेडको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब चार करोड २६ लाखबाट बढेर नौ अर्ब ८१ करोड ११ लाख पुगेको छ। बैंकले सो अवधिमा १ खर्ब ५ अर्ब ६३ करोड निक्षेप संकलन तथा ८८ अर्ब १९ करोड १२ लाख ऋण प्रवाह गरेको छ। विवरणअनुसार बैंकले ४ अर्ब ७२ करोड ५२ लाख खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ। बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात २ दशमलव ७१ प्रतिशत, कर्जा निक्षेप अनुपात ७४ दशमलव ३२ प्रतिशत, आधार ब्याजदर ६ दशमलव ९२ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा प्रतिसेयर आम्दानी ४२ रुपैयाँ ५७ पैसा रहेकोमा चालू आवको सोही अवधिमा ३० रुपैयाँ ५२ पैसा रहेको छ।
माछापुच्छ्रे बैंकको खुद नाफा १ अर्ब २४ करोड रहेको छ। जुन अघिल्लो वर्षको चैत मसान्तसम्मको नाफाभन्दा ४५ दशमलव २९ प्रतिशत बढी हो। अघिल्लो वर्ष चैतसम्म बैंकले ८५ करोड ४० लाख मात्रै नाफा कमाएको थियो। नाफामा उत्साहजनक वृद्धि गरेको बैंकले निक्षेप ५ अर्बले बढाएको छ। ग्राहकबाट संकलित निक्षेप, अन्तरबैंक सापटी र रिपोमार्फत करिब ९० अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको बैंकले ग्राहकबाट भने ८१ अर्ब निक्षेप उठाएको छ। यसअघि सबै प्रकारका निक्षेपहरु जोडेर देखाउने गरिएकोमा बैंकको परिष्कृत प्रतिवेदनमा त्यसलाई छुट्टाछुट्टै देखाइएको हो। यद्यपि ७ अर्ब ३० करोड अन्तरबैंक सापटी लिएको बैंकले २ अर्ब ३२ करोड सापटी अन्य बैंकहरुलाई दिएको छ। ७४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ भने ग्राहकहरुलाई कर्जाको रुपमा प्रवाह गरेको छ। पुससम्ममा सो बैंकको जम्मा कर्जा प्रवाह ७४ अर्ब ६५ करोड थियो।
एनएमबी बैंकले १ अर्ब ४६ करोड ६९ लाख २१ हजार रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ। गत आवका सोही अवधिमा बैंकको यस्तो मुनाफा एक अर्ब १४ करोड ३५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ थियो। चुक्ता पुँजी छ अर्ब ४६ करोड १७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ रहेको बैकले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा ८५ अर्ब ७६ करोड १७ लाख ७० हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ७५ अर्ब ७५ करोड आठ लाख ५९ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। सो घरजग्गा क्षेत्रमा तीन अर्ब ३५ करोड ९९ लाख २६ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। बैंकले सो अवधिमा २ अर्ब २६ करोड ४६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ। प्रोभिजन रकम १८ करोड ३० लाख पाँच हजार रुपैयाँ रहेको बैंकको ‘राइट ब्याक’ रकम ३४ करोड ९६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ छ भने निष्क्रिय कर्जाको अनुपात १ दशमलव १५ प्रतिशत रहेको छ। गत आवको सोही अवधिमा यो बैंकले ७१ अर्ब १५ करोड ९ लाख ९२ हजार रुपैैयाँ निक्षेप संकलन गरी ६० अर्ब २४ करोड २१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो।
एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले चालू आवको ९ महिनामा खुद मुनाफा १८ दशमलव ३७ प्रतिशतले बढाएको छ। गत वर्ष चैत मसान्तसम्म १ अर्ब ८७ करोड २० लाख ५१ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको बैंकले यसपटक मुनाफा २ अर्ब २१ करोड ६० लाख पुर्याएको छ। बैंकको वितरणयोग्य नाफा भने १ अर्ब ३५ करोड ३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ छ। एभरेष्टको खुद ब्याज आम्दानी ४ अर्ब १० करोड ६२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ३ अर्ब १६ करोड ६२ लाख ६० हजार रुपैयाँ पुगेको छ। ८ अर्ब १० करोड ६८ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ३० रुपैयाँ ७९ पैसाबाट बढेर ३६ रुपैयाँ ४५ पैसा पुगेको छ।
सिद्धार्थ बैंकले भने यो आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा १ अर्ब ६३ करोड नाफा कमाएको छ। बैंकको कर्जा र निक्षेपको आकारमा सुधार भएको छ। कर्जाको आकार १ खर्ब १ अर्ब पुग्दा बैंकले १ खर्ब ५ अर्ब पुर्याएको छ। यो आकार अन्तरबैंक ऋण तथा सापटीको रकमबाहेकको हो। बैंकले रिजर्भको आकारमा भने सामान्य मात्र सुधार गरेको छ। बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात १२ दशमलव ४० प्रतिशत, निष्क्रिय कर्जा अनुपात १ दशमलव ३६ प्रतिशत, कस्ट अफ फण्ड ७ दशमलव ५४ प्रतिशत रहेको छ।
सानिमा बैंकले ९ महिनामा १ अर्ब ५६ करोडभन्दा बढी नाफा आर्जन गरेको छ। बैंकले चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्त अवधिमा गत वर्ष सोही अवधिको तुलनामा ३६ करोडले नाफा बढाएर १ अर्ब ५६ करोड पुर्याएको हो। सो बैंकले चैत मसान्त अवधिमा ८५ अर्ब निक्षेप संकलन गरी ७९ अर्ब कर्जा लगानी गर्दा सीसीडी अनुपात ७८ दशमलव ५८ प्रतिशत कायम भएको छ। २ अर्ब ९१ करोड खुद ब्याज आम्दानी गर्न सफल हुँदा खराब कर्जा भने जम्मा शून्य दशमलव १२ प्रतिशत छ। ८ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यो बैंकको कष्ट अफ फण्ड ७ दशमलव २९ प्रतिशत छ भने स्प्रेड दर ४ दशमलव ६४ प्रतिशत छ। बैंकको आधार ब्याजदर ९ दशमलव ३१ प्रतिशत छ।
नेपाल एसबिआई बैंकले ९ महिनामा १ अर्र्ब ५८ करोड नाफा कमाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्त अवधिमा बैंकले २०७४ चैत मसान्तको तुलनामा २१ करोडले नाफा बढाएर १ अर्ब ५८ करोड पुर्याएको हो। २०७५ चैत मसान्तमा बैंकले १ अर्ब ३७ करोड नाफा आर्जन गरेको थियो। यो बैंकले पछिल्लो ३ महिनामा १६ अर्बले निक्षेप वृद्धि गरी एक खर्बको आँकडामा पुर्याएको छ। बैंकको कर्जा भने पछिल्लो ३ महिनामा ८६ अर्बबाट बढेर ८९ अर्ब पुगेको छ। बैंकले खुद ब्याज आम्दानी ३ अर्ब ५७ करोड आर्जन गरेको छ। ८ अर्ब ४४ करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ छ। बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी २५ रुपैयाँ २६ पैसा छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १५९ रुपैयाँ ५६ रुपैयाँ छ। बैंकको खराब कर्जा शून्य दशमलव १९ प्रतिशत छ। बैंकको आधार ब्याजदर ९ दशमलव ७३ प्रतिशत छ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले चालू आवको ९ महिनामा एक अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। गत वर्षको यही अवधिमा बैंकले एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो। ब्याज आम्दानी १८ प्रतिशतले सुधार गर्दा ब्याज खर्च भने ८ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ। खुद ब्याज आम्दानी ४२ प्रतिशतले बढाउँदै तीन अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ। बैंकले ९ महिना अवधिसम्ममा एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी एक खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले एक खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ९२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको थियो। बैंकले निक्षेप संकलन ११ प्रतिशतले सुधार गर्दा ऋण लगानी भने १५ प्रतिशतले बढाएको छ।
सनराइज बैंकले चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा एक अर्ब २२ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। गत वर्षको यही अवधिमा बैंकले ९४ करोड २१ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो। ब्याज खर्च १९ प्रतिशतले बढ्दा ब्याज आम्दानी भने २६ प्रतिशतले बढेको छ। निक्षेप संकलनको तुलनामा ऋण लगानी धेरै हुँदा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ३७ प्रतिशतले बढेको हो। बैंकले चैत्रसम्ममा दुई अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ भने गत वर्षको यहि अवधिमा एक अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ थियो। निक्षेप संकलन ७ प्रतिशतले सुधार हुँदा ऋण लगानी भने १६ प्रतिशतले बढाएको छ। बैंकले तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा ७२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ६९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ। चुक्ता पुँजी ८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छ भने जगेडा कोषमा तीन अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ।
सेञ्चुरी बैंकको नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको ९ महिनामा कमाएको ६७ करोड १५ लाख रुपैयाँ नाफाको तुलनामा बैंकको नाफा करिब ९ प्रतिशतले घटेर ६१ करोड ६ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको हो। कर्जाको आकारमा १०÷१० अर्बको सुधार र खुद ब्याज आम्दानीमा उल्लेख्य सुधारका बाबजुद सञ्चालन तथा कर्मचारी खर्चमा वृद्धि हुँदा बैंकको नाफा घट्न पुगेको हो। बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात शून्य दशमलव ७६ बाट बढेर १ दशमलव ५३ प्रतिशत पुगेको छ भने सीसीडी अनुपात ८० प्रतिशतको नजिक पुगेको छ। तर कस्ट अफ फण्ड, बेसरेट र स्प्रेडदरमा भने बैंकको अवस्था सुधारिएको छ।
सिभिल बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा ४९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ। बैंकले उक्त अवधिमा नाफाको आकारमा ४७ दशमलव २० प्रतिशत वृद्धि गर्न सफल भएको हो। अघिल्लो वर्ष ९ महिनामा बैंकको नाफा ३३ करोड ५५ लाख रुपैयाँमा सीमित थियो। बैंकको एनपीएल ३ दशमलव ९६ प्रतिशत, कस्ट अफ फण्ड ८ दशमलव ४० प्रतिशत, सीसीडी अनुपात ७६ दशमलव ६६ प्रतिशत, बेसरेट ११ दशमलव २० प्रतिशत तथा ब्याजको स्प्रेडदर ३ दशमलव ३८ प्रतिशत छ।
जनता बैंकले चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा बैंकले कुल १ अर्ब २ करोड नाफा गरेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैैंकको नाफा ६३ करोड ७५ लाखमा सीमित थियो। उक्त अवधिमा १ अर्ब ६७ करोडको ब्याज आम्दानीलाई २ अर्ब ४५ करोड तथा २३ करोडको गैरब्याज आम्दानीलाई ४० करोड पुर्याएको बैंकले निक्षेप र कर्जाको आकारमा १२(१२ प्रतिशतकै वृद्धि गरी क्रमशः ७० अर्ब र ६४ अर्ब पुर्याएको छ।
हिमालयन बैंक लिमिटेडले ९ महिनामा बैंकको २ खर्बको नाफा आर्जन गरेको छ। यो अवधिमा १० अर्ब निक्षेप र ९ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको बैंकले उक्त अवधिमा खुद ब्याज आम्दानी ५५ करोड रुपैयाँले बढाएको देखिएको छ। ८ अर्ब ५२ करोड चुक्ता पुँजी भएको बैंकले एक वर्षको अवधिमा रिजर्भको आकार करिब ६७ करोड रुपैयाँले बढाएर ५ अर्ब १९ करोड पुर्याएको छ। उक्त अवधिमा बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको छ भने कस्ट अफ फण्ड पनि बढेको छ। तर बेसरेटमा भने बैंकले ३२ बेसप्वाइन्टको सुधार ल्याउँदा ९ दशमलव १० प्रतिशत कायम भएको छ। बैंकले ब्याजको स्प्रेडदर ४ दशमलव ५० प्रतिशत कायम गरेको छ।
प्राइम बैंकले नौ महिनामा १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ। बैंकको ब्याज आम्दानी १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँबाट २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ भने कर्मचारी खर्च भने ४५ करोडबाट बढेर ५७ करोड पुगेको छ। बैंकले एक वर्षको अवधिमा रिजर्भको आकार १ अर्ब ८३ करोड २ अर्ब ३३ करोड पुर्याएको छ। बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात करिब शून्य दशमलव ५२ प्रतिशतले बढ्दा १ दशमलव ५८ प्रतिशत पुगेको छ। बैंकले बेसरेट र कस्ट अफ फण्डमा सुधार गरेर क्रमशः १० दशमलव २० प्रतिशत र ८ दशमलव २९ प्रतिशत कायम गर्न सफल भए पनि ब्याजको स्प्रेडदर भने घटेको छ।
नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकको चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १ अर्ब १६ नाफा आर्जन गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको ९ महिनामा रहेको ८८ करोड ८० लाखको नाफाको आकारलाई बैंकले चैत मसान्तसम्म ६१ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५६ अर्ब ८० करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ। बैंकको कुल चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुगेको रिपोर्टमा देखाइएको छ। बैंकको उक्त आकारको नाफा विस्तारमा बैंकको बढेको ब्याज आम्दानी प्रमुख कारकको रुपमा छ। अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ४४ करोड रहेको बैंकको उक्त आम्दानी यो वर्ष बढेर २ अर्ब २३ करोड पुगेको हो।
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको नाफा २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ नाफा पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। बैंकले यो अवधिमा निक्षेप ८ अर्बले बढाएर १ खर्ब १२ अर्ब तथा कर्जा लगानी करिब १० अर्बले बढाएर १ खर्ब १० अर्ब पुर्याएको छ। ६ प्रतिशत लाभांशको ६ अर्ब अग्राधिकार सेयर भएको बैंकले कर्मचारी खर्चमा अघिल्लो वर्षको करिब १९ करोडले कमी ल्याई २ अर्ब ५३ करोडबाट २ अर्ब ३४ करोडमा झारेको छ। ब्याज आम्दानीमा भने बैंकले ४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँबाट बढाएर ५ अर्ब ३० करोड पुर्याएको छ।
मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म १ अर्ब २१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको छ। ६ महिनामा ७३ करोड २० लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको बैंकले ९ महिना अवधिमा थप ४८ करोड २२ लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको छ। गत वर्षको चैत मसान्तसम्म ५२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको बैंकले यस आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १ सय ३१ प्रतिशतले अधिक मुनाफा गर्न सफल भएको छ। यो अवधिमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बैंकको कुल निक्षेप ३२ अर्ब २१ करोडले वृद्धि भई ७५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसैगरी, खुद कर्जा तथा सापटी २८ अर्ब ७१ करोडले वृद्धि भई ७० अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ, जुन ६९ दशमलव ५४ प्रतिशतको वृद्धि हो।
लक्ष्मी बैंकको नाफा १ अर्ब नाघेको छ। बैंकले चालू आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्म १ अर्ब २ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा कामएको हो। यो अघिल्लो वर्षको सोही समयको भन्दा १६ करोडले बढी हो। चैत मसान्तसम्म बैंकको निक्षेप ७८ अर्ब ६६ करोड तथा कर्जा प्रवाह ७३ अर्ब ९६ करोड पुर्याएको छ। बैंकले रिजर्भको आकार भने स्थिर राख्दा २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १ अर्ब ६३ करोडबाट २१९ करोड, गैरब्याज आम्दानी ३५ करोडबाट ४४ करोड पुग्दा कर्मचारी खर्च ५२ करोडबाट ७० करोड तथा सञ्चालन खर्च ३१ करोडबाट ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिएको छ।
बैंक अफ काठमाण्डूले ९ महिनाको अवधिमै १ अर्ब २० करोड नाफा कमाएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको नाफा २९ प्रतिशतले बढाएर नाफा उक्त आकारमा पुर्याएको हो। बैंकले उक्त अवधिमा ८१ अर्ब निक्षेप संकल गरी ७१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकको सीसीडी अनुपात ७८ दशमलव ५१ प्रतिशत पुगेको छ। बैंकको रिजर्भको आकार भने १ करोड रुपैयाँले घटेर ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा झरेको छ। बैंकको नाफाको उक्त बढोत्तरीमा ब्याज आम्दानीको महत्वपूर्ण योगदान छ। बैंकको ब्याज आम्दानी अघिल्लो वर्ष २ अर्ब ६ करोड रहेकोमा यो वर्ष २ अर्ब ७३ करोड पुगेको देखिएको छ।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेडको ९ महिनाको नाफा १अर्ब ७३ करोड पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको १ अर्ब ५५ करोडको नाफालाई करिब १८ करोडले बढाएर उक्त आकारमा पुर्याएको हो। ८ अर्ब १ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भई ७० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ निक्षेप तथा ५३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको बैंकले उक्त अवधिमा रिजर्भको आकार करिब ७६ करोड रुपैयाँले बढाएर ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। बैंकको खुद ब्याज आम्दानी २ अर्ब ३९ करोडबाट २ अर्ब ५५ करोड पुग्दा गैरब्याज आम्दानी ४४ करोडबाट ५३ करोड पुगेको छ। बैंकको कस्ट अफ फण्ड अघिल्लो वर्षभन्दा १ दशमलव ६१ प्रतिशतले बढेर ५ दशमलव ४१ प्रतिशत पुगेको छ भने आधार ब्याजदर ७ दशमलव २० बाट ७ दशमलव ७४ प्रतिशत पुगेको छ।
नेपाल बंगलादेश बैंकको नाफा करिब ५५ प्रतिशतले बढेको छ। चालू आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्म बैंकको नाफा अघिल्लो वर्षको सोही समयकोभन्दा ५४ दशमलव ६६ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब १४ करोड पुगेको हो। अघिल्लो वर्ष बैंकको नाफा ७३ करोड ८० लाखमा सीमित थियो। बैंकको ब्याज आम्दानी १ अर्ब ३९ करोडबाट बढेर २ अर्ब ११ करोड पुर्याएको छ। आम्दानीसँगै बैंकको कर्मचारी खर्च ४७ करोडबाट बढेर ७२ करोड पुगेको छ। बैंकले चैत मसान्तसम्म ५५ अर्ब ८७ करोड निक्षेप संकलन गरी ५१ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको हो।
प्रभु बैंकले चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १ अर्ब ४५ करोड नाफा कमाएको छ। बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३ दशमलव ९० बाट घटेर २ दशमलव ४२ प्रतिशतमा झर्दा लोन लस प्रोभिजन ७५ प्रतिशतबाट बढेर १३० प्रतिशत पुगेको छ। त्यस्तै अघिल्लो त्रैमासिकमा ६ दशमलव ३९ प्रतिशत रहेको कस्ट अफ फण्ड शून्य दशमलव २१ प्रतिशतले घटेर ६ दशमलव १८ प्रतिशत कायम हुँदा बेसरेटमा १ दशमलव ०१ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेर ९ दशमलव १६ प्रतिशत कायम भएको छ।
कुमारी बैंकले चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामै एक अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। बैंकले गत आर्थिक वर्षभरिमा एक अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको थियो। बैंकले गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३६ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ। गत वर्षको यही अवधिमा कुमारी बैंकले ७३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो। ब्याज खर्चको तुलनामा ब्याज आम्दानी सुधार गरेको बैंकले ९ महिनामै दुई अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेको छ। बैंकले गत वर्षको चैत भन्दा ४१ प्रतिशतले ब्याज आम्दानी वृद्धि गरेको छ भने ब्याज खर्च ३४ प्रतिशतले बढेको छ।
सिटिजन्स बैंकले १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सिटिजन्स बैंकले ९ महिना अर्थात चैत समसान्त सम्मको अवधिमा १ अर्ब ६ करोड नाफा गर्दै ६६ करोड रुपैयाँ बाँड्न मिल्ने नाफा आर्जन भएको जनाएको छ। बैंकको नाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधीको तुलनामा ५ दशमलव ४९ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको चैत मसान्तमा बैंकले १ अर्ब ९८ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो। चैत मसान्तसम्ममा बैंकमा ६५ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ। यस्तै बैंकले ६१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ कर्जा दिएको छ। बैंकको प्रति सेयर आम्दानी १७ दशमलव ५ रुपैयाँ रहेको वित्तीय विरणमा विवरणमा उल्लेख छ।
प्रकाशित ३० बैशाख २०७६, सोमबार | 2019-05-13 18:57:25